Ogaden News Agency (ONA) – Xiisad Dhinaca Xuduuda Ah oo Udhaxaysa Itoobiya Iyo Sudan.
Xiisad Dhinaca Xuduuda Ah oo Udhaxaysa Itoobiya Iyo Sudan.
Posted by Dulmane	/ August 3, 2018
Wararka naga soo gaadhaya xuduuda wadamada Sudan iyo Itoobiya ayaa sheegaya in is afgaran waa uu kajiro xuduuda labada wadan udhaxaysa oo calaamadin cusub lagu waday baryihii lasoo dhaafay.
Sida xogta aan kuhelayno saraakiil katirsan xukuumada Sudan ayaa shirkada calaamadinta xuduuda labada wadan kacodsaday in ay dhakhsadaan si looga baaqday is fahan waa dhex mara labada wadan oo ku kala aragti duwan calaamadinta xuduuda.
Dowlada wadanka Sudan ayaa qabta in dhul ay leeyihiin uu jiro dhinaca Itoobiya, waxayna Sudan u aragtaa in si sharci daro ah looboobay dhulka wadanka Sudan ee kudheeraran Gobolka Axmaarada ee Woqooyi galbeed Itoobiya.
Dhinaca kale qoomiyada Axmaarada oo garab kahaysata xukuumada Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegtay in aysan haysanin hal taako ah oo dowlada Sudan ay leedahay, waxayna Axmaaradu sheegtay in dhul ay qoomiyadoodu leedahay uu haysto wadanka Sudan.
Dhinaca kale Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed ayaa bil kahor tagay magaalada Khartum ee wadanka Sudan, halkaas oo arimihii uu madaxwaynaha Sudan Cumar Xassan Al bashiir uu kala hadlay ay kamid ahayd arinta xuduuda ee labada wadan.
Xukuumadaha Gumaysiga Itoobiya soomaray ayaa ah kuwo kucaan baxay dhul boob iyo waliba daris xumo, waxayna waxayna dhul kahaystaan wadamo dhowr ah oo ay kamid yihiin Sudan, Eritrea, Somalia, Kenya iyo waliba wadanka Ogadenia oo kabi ahaanba kujira kacan shisheeye.